ဟောင်ကောင် ၁ဘီလျံဒေါ်လာတန် သတို့သားအလိုရှိသည်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟောင်ကောင် ၁ဘီလျံဒေါ်လာတန် သတို့သားအလိုရှိသည်…
ဟောင်ကောင် ၁ဘီလျံဒေါ်လာတန် သတို့သားအလိုရှိသည်…
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Jan 24, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.., News | 38 comments
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ၊ ဦးကျောက်ခဲ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ Yahoo! သတင်း တစ်ပုဒ်ကို လက်ဆော့လိုက်တာပါ ။ မှားတာရှိရင် သီးခံပြီး ဖတ်ပေးကြပါဦး…
ဟောင်ကောင်သူကြွယ်ကြီးတစ်ဦးက သူ့သမီး မယ်ဘောပြား ( ယောက်ျားရှာများကို ခွဲခြား နှိပ်ကွပ်တာမဟုတ်… အရှိကို အရှိအတိုင်း… ဟိ ) ရဲ့ အသည်းစိုင် ဆွဲကိုင်မည့် မဟာပုရိဿ သတို့သားလောင်းအတွက် ၊ ကနဦး ကမ်းလှမ်းချက်ကို စိတ်ဝင်စားသူ ၂၀၀၀၀ခန့် ရှိနေသည့်ကြားမှ ဆုတော်ငွေထပ်တိုးလို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း၁၃၀ ချီးမြှင့်ဘွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းများကဆိုပါတယ် ။
လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ခန့်ကလည်း ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်စေမည့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ သန်း၅၀၀ နဲ့ ညီမျှတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅သန်း ကို သူ့သမီးတော် မယ်ဘောပြား “ဂီဂီ” ဘဝပြောင်းအောင် ပြုစားနိုင်မည့် သတို့သားအား ချီးမြှင့်မယ်လို့ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်သူဋ္ဌေးကြီး မစ္စတာချောင် (Cecil Chao) က ကြော်ငြာဖူးပါတယ် ။
ယခုတော့ဖြင့် ကမ်းလှမ်းချက်ကို တိုးမြှင့်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလို့ မလေးရှား ဝါနိဇ္ဇဗေဒ သတင်းများကဆိုပါတယ် ။
အသက် ၇၇နှစ်အရွယ် သူကြွယ်ကြီးမှ သူ့သမီးရဲ့ အသည်းစိုင်ကို ဆွဲကိုင်နိုင်ရင်ဖြင့် ၂ဆတိုးလို့ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁ဘီလျံဒေါ်လာ ချီးမြှင့်ပါ့မယ်လို့ The Edge မဂ္ဂဇင်းကို အရိပ်အမြွတ်ဆိုပါတယ် ။
“ကျနော့သမီးရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဝကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ချင်ပါဘူး ။ ကျနော့သမီးလေး အိမ်ထောင်ရက်သားကျလို့ သားသမီးတွေရစေချင်သလို ၊ ကျနော့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေကို အုပ်စီးစေချင်တာပါ” လို့ မစ္စတာချောင် က အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းကို ဖွင့်ဟပါတယ် ။
ဒါပေမည့် အခုလို ဓနအင်အားသုံးပြီး သားမက်လောင်းရှာပုံတော်ဖွင့်တာကို သားမီးတော် “ဂီဂီ” နဲ့ သူမရဲ့ ၉နှစ်ကြာလက်တွဲဖော် ရှောင်န်အေ့ဗ် (Sean Eav) တို့ကို ပူပန် စိတ်ပျက် စေပါတယ်” လို့ “တောင်တရုတ် နံနက်ခင်းသတင်း” (South China Morning Post) က ဆိုပါတယ် ။
“ကျမစိတ်ဝင်စားစေမည့် အမျိုးသားကို ဖေဖေ ဘယ်လိုပဲ ဥစ္စာဓနသုံးပြီးရှာရှာ ၊ ကျမတော့ မထင်ပါဘူး” လို့ ၃၃နှစ်အရွယ် သားမီးတော်က ဟောင်ကောင်သတင်းစာကို ဖွင့်ဟပါတယ် ။
“ကျမရဲ့ အချစ်၌သက်ဝင်ချင်း အလှုရံပုံငွေအဖွဲ့ကို အလုံးအရင်းနဲ့ အလှုငွေထည့်ဝင်ကြတဲ့ ပုရိဿများနဲ့လည်း ခင်ခင်မင်မင်ပါ ၊ သူတို့ကလည်း ကျမမှာ ဇနီးရှိပေမည့် စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ကြပါဘူး”
“တတိယနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြောချင်းပါ ၊ ဖေဖေ့ကို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် ၊ ချစ်လည်းချစ်ပါတယ်” လို့ သူမကဆိုပါတယ် ။
ဟောင်ကောင်ဥပဒေအရ လိင်တူချင်းလက်ထပ်တာကို အသိအမှတ်မပြုတာမို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ “ဂီဂီ” ဟာ အခန်းအနားနဲ့ “အေ့ဗ်” ကို လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများကဆိုပါတယ် ။
မစ္စတာချောင်ရဲ့ ကနဦး သူတို့သားအတွက် ဥစ္စာဓနကမ်းလှမ်းချက်ဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းက အမျိုးသား ၂၀၀၀၀ လောက်ကို စိတ်ဝင်စားစေပေမည့် “ဂီဂီ” ရဲ့ နှလုံးသားကိုတော့ မယိမ်းယိုင်စေပါဘူး ။
သူမ ဖခင်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ပက်သက်ပြီး အလှမ်းဝေးနေသေးတဲ့ “ဂီဂီ” က ၊ ဖခင်ကြီး သူမကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုတာပါလို့ သတင်းစာကို ဖွင့်ဟခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဒါပေမည့် ဥစ္စာဓနကမ်းလှမ်းချက်ကို လူသိရှင်ကြား မလှစ်ဟဖို့ အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါကြောင်းကိုလည်း “တောင်တရုတ် နံနက်ခင်းသတင်း” (South China Morning Post) ကို ပြောပြပါသေးတယ် ။
အခုတော့ ဗြိတိသျှ ဓာတ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ လူရွှင်တော် Sacha Baron Cohen (Ali G, The Dictator, etc. ) က ဒီဇာတ်လမ်းကို အခြေပြုပြီး ဓာတ်ရှင်ရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းထွက်နေပါတယ် ။
Cheuk Nang အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းစုရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မစ္စတာချောင် နဲ့ သားမီး ဂီဂီ ကို မှတ်ချက်ပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့အထိ ဆက်သွယ်လို့ မရပါကြောင်း “SG Yahoo” က ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် ။
တကယ်တော့ မစ္စတာချောင် ဟာ ဟောင်ကောင်လူကုံထံများကြားမှာ ကျင်လည်ကျက်စားသူ ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တိုင်းမှာ ကညာပျိုအသစ်လေးတွေနဲ့ တွဲခုတ်တတ်သူ ၊ မဒီကညာ အပါး ၁၀၀၀၀လောက်နဲ့ အုံးစက်ရာယှဉ်ဖူးသူလို့ နံမည် ကြီးကြောင်းပါခင်ဗျား…။
ဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီး ချစ်ဇနီးကို ဟောင်ကောင် ၁ဘီလျံဒေါ်လာမက တန်ဖိုးထားကြောင်း ခပ်ကြွားကြွားလေးဆိုမိတာပေါ့ဗျာ ။ ဟုတ်တယ်လေ ၊ အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားရင်ဖြင့် မယ်ဘောပြား “ဂီဂီ” ကို ဖျာသွားရောင်းမှာပေါ့… လို့
မြန်​မာထီတို့ နှစ်လုံးထီတို့ထက်ပိုမိုက်သဗျ ဟဲ ဟဲ
ကိုင်း ဗျာ အလိမ္မာ အိမ်ပါ ဆိုတော့
ဟောင်ကောင်ကာလသားများ မျှော်စေသတည်းပေါ့ ….
ရွာထဲက လူပျိုသိုး​များလည်း ကံစမ်းကြည့်​ဖို့မ​ကောင်းလား အစ်​ကို​ရေ.
ဂဇက်ကာလသားများလည်း အကြုံးဝင်ပါတယ် ကိုရင်ဆာရဲ့…
ဟောင်ကောင် ၁ဘီလျံဆိုတော့ မြန်မာငွေ ၁၃၀ဘီလျံလေ… ဟီ ဟိ
ဒါပေသည့်… ဒါပေသည့်… ဒါပေသည့်… အား ဟိ
. ပြောရရင် အတော်ဂွကျတယ်ပြောရမှာဘဲ
( မာမီတို့ကလည်းမိန်းမဆို မကြိုက် )
ရုပ်ဆိုးနေရင်တောင် မျက်နှာကိုဆောင်နဲ့အုပ်ပြီး $#^#@ ဂဒေါ့ဘါဗျာ
ခုဟာက လိုင်းလဲတူတာမဟုတ်ဘူး ဘောပြားကြီး
ပိုက်ဆံမက်ကဲ့ရဲ့ခံပြီးယူရဦးမှာ ( ဟိုကဖီးလ်းလာဦးမှ )
မတော်မတည့် မင်္ဂလာဦးညမှာ အခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့
အာပီဂျီကြီးကိုင်ပြီး လာလေ လာလေဆို ပတ်ပြေးရမှာ
သူ့ဘါသာ ပလာတာကြိုက်တာ လူ့အခွင့်ရေးပါနော
ပါပါ ဟုတ်ပါဘူးဘွာ သူ့ဒယ်ဒီကိုတိုက်တွန်းပါဒယ်
ခီညားပြောမှ အာပီဂျီကြီးစိတ်ထဲ မြင်ယောင်လာတယ်…
ဟမ်မယေး… ဘွပျက်မည့်ကိန်း… ၁ဘီလျံလည်း မမက်တော့ပါဘူး…
အဲဒီ၂၀၀၀၀ထဲအူး​ကျောက်​မပါခဲ့ဘူးဆိုတာ ဘယ်​လိုသက်​​သေပြမလဲ :-)
အလိုလေးဗျာ… မယ်ခွစ်စ် တို့ ဆေးထိုးချက်…
ဆန်ကြမ်းကို ပြုတ်သောက်ပါ့မယ်… အဲသည့်ပြုတ်မနူးကြီးတော့…
မတော် စိတ်ဖောက်ပြီး ထန်းသီးထကျွေးမှ ဘတ်ဘ်သီးတွေ ကြွမ်းကုန်ပါ့မယ်…
စိတ်ကူးနဲ့တောင် မချော်မိပါကြောင်းးးးး… အားဟိ
ထန်းသီးဆိုတာဘာလဲဟင်.. ဘယ့်နှယ့်နာမည်ကြီးက ကျုပ်ညီလေးနဲ့ဆင်နေရသတုန်း…အဟိဟိ
ထန်းသီး = လက်သီး
ဘတ်ဘ်သီး = မျက်လုံး
ဟီ ဟိ နာမယ်က အော်ရီဂျင်နယ်ပါဗျ…
ဘာပုလို့များ လိင်ပြောင်းထားတဲ့ သားမီးရီးကို ယောက်ကျားအတင်းပေးစားဘာလိမ့် :/
ဟိုကလဲ ယောက်ကျားမယူချင်ဘဲ ဘာပုလို့ လိင်ပြောင်းဘာလိမ့် o_O
သများနားမလည်တော့ဝူး အန်ကယ်ကျောက်စ်…..ဒါပေသိ နောက်ဆုံးတကြောင်းကတော့
လိင်မပြောင်းရသေးတဲ့ မယ်ဘောပြားပါ ချွေအိရယ်…
ဖအေကြီးရဲ့ ခြေရာကို မှားတဲ့ဘက်မှာ အပြည့်နင်းလိုက်တာ ထင်ပါရဲ့…
နောက်ဆုံးစာကြွင်းက ချစ်ဇနီးကို ဖားထားတာလေ… အာဟိ
အဲ့ဒီ “ဂီဂီ” က့ရွာထဲက ဆရာ”ဂီ” များလားဟင်..ရှင်းပြပါဆကျောက်စ်…ဟိဟိ
ဂျာပွန်ပြန် ရွာသား ဂီဂီသည် “အလော်တကုံး” ဖြစ်ဖွယ်ရှိ၍…
အနှီ ဟောင်ကောင် ဂီဂီ သည်ကား စင်စစ်အားဖြင့် “အပြော်တကား” တည်း…
ဘာယဲ… လူပျိုဂျီး ဆြာညို ၁ဘီလျံဒေါ်လာမန်း လုပ်တော့မို့လား… အားဟိ
၈တန်းတုန်းတည်းက သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်(မိဘကလည်းချမ်းသာတယ်)ဟာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက် ယောကျာ်းလျှာ(အသားမဲပြီးရုပ်ဆိုးတဲ့)နဲ့လိုက်ပြေးတယ်။
အိမ်ကပြန်ခွဲလဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ စောင်ကိုကြိုးလုပ်လို့ဆင်းပြေးပြန်လိုက်။
ဖအေက ဆိုက္ကားနင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းဆိုရင်ပြီးရောကြိုက်တာနဲ့ယူပါ ဆိုတာကိုလုံးဝမရဘူး။
စိတ်ကြီးရယ် ညစ်ပါရဲ့ သာမီးသော်ရယ်…
အဲဒါမျိုးတွေကြားရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်… ဟိ
အင်း… အနေကလည်းနီးစပ် ၊ ဟို ဘောပြားကလည်း သိမ်းသွင်းလို့ နေမှာပေါ့…
သိပ်တော့ နားမလည်ဘူး။ လိင်လည်းမပြောင်းရသေးဘူး။ ပြီးတော့ မိန်းမကိုပဲကြိုက်တာဆိုတော့ အဲဒါ ယောက်ျား မဟုတ်ဘူးလား။
လိင်လည်းမပြောင်းရသေး ၊ ယောက်ျားစင်စစ်လည်းမဟုတ်တဲ့…
ယောက်ျားလျာ “မယ်ဘောပြား” ပါ ခီညာ…
ပြောမည့်သာပြောရ ၊ ကျောက်စ်မှာလည်း တူမချည်း ၃ယောက်မို့… ဖျား ဖျား
မြှုံးမိတဲ့ငါးလို ဟစေ့ဟစေ့ (ပါးဟတ် ပြောတာ) ဖစ်တွားမယ်…
က်ျားစစ်စစ်တွေရှားနေဒယ်… တန်ဖိုးထားပါ… ဟီ ဟိ
ကိုကျောက်ရဲ့ ရှုပါ တွေ ဗျူဟာတွေ နဲ့ ဆို ဒီ သူငယ်မ တောင့်မခံနိုင်လောက်ဘူး ဗျ
ကိုကိုကျောက် ကို ယူမယ်
ကိုကိုကျောက် ကို ယူမယ် ဖြစ်သွားမှာ သေချာတယ်
မကျီစားပါနဲ့ ကိုရင်မှို အဲ… ကိုရင်နို ရယ်
ချစ်ဇနီးက “ဂေ့” ကနဲပဲ လေတက်တက် ၊ “ဂွီ” ကနဲပဲ ဗိုက်ကမြည်မြည်…
မျက်မှောင်ကုပ်ပြီးကြည့်တတ်လို့ အနေအထိုင် ဆင်ချင်ရပါတယ်ဆိုမှ…
(ဟိ… လူ အထင်ကြီးမလားလို့ပါ….)
၁၀နှစ်မှာ.. ၃၆၅၀ ရက်…
အနှစ် ၂၀မှာ… ၇၃၀၀ရက်..
မဒီကညာ.. အပါး ၁သောင်းနဲ့.. ဘယ်လိုများ.. အိပ်လိုက်တယ်မသိ…။
အခုအသက်က.. ၇၇နှစ်ဆိုတော့.. ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ..။
. အခြေနေအရ သူ့ဖါသာ အလိုတူသူ ခြင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
. သူ့အိပ်ယာကို လုယူတယ်ဆိုတာ
မစ္စတာချောင်ကို မာမွတ်ခိုမ်လို သဂျီးဂဒေါ်တယောက်နဲ့တင် လျှာထွက်နေတယ် မှတ်သလား၊ ၃ သုံးလီ ၉ ဆိုတာ မမေ့နဲ့ဦးလေ…။ အနော်ဆို ၃ လေးလီ ၁၂ အသာလေးပဲ..။ ခွစ်လေး သတ္တိရှိမှ စိမ်ခေါ်နော်.. ဦးကြောင်က ဒါမျိုးဆို အညှာဓာတ်ဗူး.. ရေကုန်ရေခမ်း တီးမှာ…
ဟီ ဟိ သဂျီးပြောဖူးတဲ့ မိနစ်၂၀ နှုန်းနဲ့ တွက်လိုက်ရင် လိုပါသေးတယ်…
နောက်ပြီး… မြန်မာ ၂ပါးသွားကသလို ဆိုရင်ရော….
ဘာပဲဖစ်ဖစ်… မစ္စတာချောင်ကို မင်းတုန်းမင်းက သနားတယ် တဲ့…
အောင်မယ်လေးကျောက်စ်ရယ် ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ်ယုံလို့ သွားဖြာမရောင်းတာကိုမြန်း ဇနီးလေးကို တန်ဖိုးထားသလေးဘာလေးနဲ့အမှတ်ယူနေသေး ဟေးဟေး
မယ်ဘောပြားလေး အသီးကွဲပြီး အမျိုးသားထုကြီးကို စိတ်နာသွားမစိုးလို့ပါ…
ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ… ၁ဘီလျံလောက်နဲ့ မလဲနိုင်ပါဘူးဗျာ… ဟီ ဟိ
အာဟအာဟ ဘောပြားမြန်း အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပြောဒေါ့ဘာဘူး ဟီဟိ
အဲ့ သမီးတော်ကို ထိုင်းကိုပို့ပြီး ဟိုပြင်ဒီပြင် လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်
သူ့လုပ်ငန်းကိုလဲ အုပ်အုပ်စီးစီး ရှိနိုင်မယ် ထင်ပ
အဲ… မျိုးဆက် အတွက်ကိုတော့
လုံးတဲ့သူက ကထေလ်လုပ်ပြီး ပြားဖို့လွယ်ပေမည့်…
ပြားတဲ့သူက လုံးအောင်လုပ်ဖို့ မလွယ်သေးဘူးကွယ့်…
ရှင်းပြရခက်ပါတယ်လေ… ပေါက်ကရတွေ မစဉ်းစားနဲ့… ဟတ်လား
အတွေးမမှားနဲ့ … ဟီဟိ
ဟီ ဟိ အတွေးမမှားဘူး…
ဥစ္စာဟူသည် မျက်လှည့်မျိုးတဲ့… မတော်တာဂျီး အဖတ်တင်နေမှ… ဟိ
နီ စိတ်ဝင်စားနေပီလား.. အံစရာ..
အဟမ်း… အိမ်မပိုင်ရင် ဂေါ်လီမလုပ်နဲ့ အံစရာ…
တွေ့ဘီ မဟုတ်လား… ခွိစ် ခွိစ်
သူ့အော်ရင်ဂျင်နယ်ကိုက “ဂီဂီ” တဲ့…
ဟီ ဟိ… “ဘောပြားဂီ” နဲ့ “ဒေါင်းကားယားဂီ”
သတို့ သမီး လိုအပ်မှ ဆက်သွယ်တော့မယ်။
သတို့သမီးက ဘူ့အတွက်လဲ… မိဇာဂျီး
ရွာထဲက မားပု မားဆွေ မားယွဲတို့ အတွက်လား…
မနောက်နဲ့နော်… ဝေါင့်ဝေါင်ဝေါင်းက ငိုလိုက်မှာတဲ့… ဟီ ဟိ